Ku soo geliso Quudintaada Akhristaha Google waxyaabaha aad ugu jeceshahay Teknolojiyada | Martech Zone
Tuesday, April 17, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah sababaha tiknoolajiyada darajooyinka Technorati waa inta meelood ee wax qora ee wax qora ay ku keydsadeen baloogaga inaad jeceshahay koontadooda Technorati (waad ku dari kartaa halkaan).
Haddii aad isticmaaleyso Google Reader ama Akhristaha kale ee Quudinta, dhab ahaantii waxaa jira qaab fudud oo fudud oo lagu daro dhammaan kuwa aad ugu jeceshahay, in kastoo! Waad dhoofin kartaa OPML faylka ka aqri akhristahaaga oo si fudud ugu soo dhoofso Technorati:
Dhoofinta an OPML ka yimid Google (xiriirka hoose bidix):
Keenistaada OPML u fayl galiya kuwa ugu cadcad Technorati:
Xiriir: Soo deji taada OPML u fayl galiya kuwa ugu cadcad Technorati.
Waxaan isweydiiyey sida tan loo sameeyo, waxaanan ka fekerayey inaan sameeyo barnaamij.
Fikirkeyga kaliya ayaa ah in tani aysan u maleyneynin quudinta Feedburner si sax ah?
Haddii quudinta lagu qeexay Technorati ay la mid tahay quudinta Feedburner way fiicnaan doontaa. Waxay kaliya sameyneysaa ciyaar toos ah oo udhaxeysa cinwaanka quudinta ee faylkaaga OPML iyo Technorati.
26, 2007 at 6: 58 PM
Haye, waan ogahay inay tani tahay qoraal duug ah, laakiin waan istcimalay markaa, aad baan u caawiyay, mahadsanid 🙂
26, 2007 at 9: 34 PM
Waad sharadaysaa, muskawo!